Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya oo baarlamaanka ka codsaday in ay xasaanada ka qaadaan xildhibaano lagu eedeeyay qaran dumis - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya oo baarlamaanka ka codsaday in ay xasaanada ka qaadaan xildhibaano lagu eedeeyay qaran dumis
Sawirka: Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday in ay xasaanada ka qaadaan xildhibaano lagu eedeeyay qaran dumis.
“Waxaan rabaa in aan cadeeyo xildhibaano maalmahaan ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya, iyaga oo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi, sidaas darteed ay lagama maarmaan tahay in tilaabada sharci ee ku habboon laga qaado qofkii uu ku cadaado fal dambiyeed,” ayuu ka sheegay Xeer Ilaaliyuhu shir jaraa’id oo maanta oo Axad ah uu ku qabtay Muqdisho.
Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka ay u gudbiyeen qoraal ka dhan ah labo xildhibaan kuwaasoo lagu eedeeyay sharci daro iyo qaran dumis.
“Waxaan maanta guddoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaankaba u gudbinay qoraal cadaynaya labo xildhibaan oo abaabul iyo sharci daro iyo qaran dumisnimo lagu eedaynayo, cadaymaheedii iyo baaritaankeediina uu dhammeystiranyahay in ay xasaanada ka qaadaan, si loo horgeeyo sharciga baarista dhimmana loo dhammeystiro,” ayuu yiri Axmed Cali Daahir.
“Labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan Xasan Maxamed Macalin Maxamuud iyo xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye, labadaas xildhibaan oo baaris dheer xafiiska ay u muuqatay in ay galeen fal dambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo.” Ayuu ku sii daray.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland ayaa ku sii durgaya duleedka magaalo xeebeedka Qandala ee gobolka Bari, sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan. Ciidamada Puntland ayaa sheegay in khasaare badan oo nafadeed ay u geysteen maleeshiyada ISIS maalintii [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa oo shalay oo Arbaco ahayd yimid magaalada Gaalkacyo ee gobolka ayaa kulamo kala duwan la yeeshay masuuliyiinta iyo waxgaradka gobolka Mudug ee labada maamul Puntland [...]